Iifcolor ezimnandi zegcisa lomculi waseIndonesia uLuqman Reza Mulyono | Izidalwa ezikwi-Intanethi
U-Luqman Reza okanye yaziwa ngcono emhlabeni njenge 'ijongkie' ngumzobi kunye nomzobi ovela eKota Wisata Batu, eIndonesia. Ifumene ukwamkelwa kunye nokuxabiseka kweziza ezinkulu ngaphakathi kwezonxibelelwano njenge Instagram isimbo sayo esikhethekileyo kwi imizekeliso ecacileyo, Eyenzayo kwi Ikholam yamanzi.
Isitayile sakhe esahlukileyo siyimizekelo njengesiphumo sokungaphindi nje umfanekiso lowo awusebenzisayo, kodwa esongeza isitayile sakhe esebenzisa ukucinga, apho abeka khona ubuchule bakhe kubizo lwakhe. «Iziphumo zomlingo«.
Jongkie uchaza umsebenzi wakhe njenge 'Ihlabathi elimnandi'. Oku kubonakala ngombono awubhencayo, etolika le miyalezo kunye nezitayile ezibamba kuyo yonke indawo yomsebenzi awenzayo.
Ndifuna ukwabelana ngombono wam kwaye ndikhuthaze abantu ngemizekelo emihle kunye nomsebenzi wam. Jongkie.
Jongkie Andizange ndicinge ukuba angakwazi ukuguqula ukuthanda kwakhe kunye nokuthanda kwakhe kube shishini. Nangona kunjalo, iphupha lakhe lazaliseka njengoko abantu abaninzi beqala ukuqonda umsebenzi wakhe. Okwangoku isebenza kwilizwe lehlabathi enkosi kubantu abohlukileyo kwihlabathi liphela njengesiphumo somdla wabo emsebenzini wabo. Ukuprintwa kwemisebenzi yakhe yobugcisa ikwafumaneka xa uceliwe ukuba ube nakho ukuthenga. Emva koko ndishiya eminye yemisebenzi kwigalari yemifanekiso nengqokelela yemisebenzi yakhe. Ndiyanqwena uyayithanda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iifcolor ezimnandi zegcisa lomculi waseIndonesia uLuqman Reza Mulyono